Regularly taking the pill 'helps prevent two forms of cancer' အသုံးပြုမှုပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာ - သတင်း Rule
မှန်မှန် 'အဆေးလုံးကိုယူပြီးကင်ဆာရောဂါနှစ်မျိုးနှစ်ပုံစံများကိုကာကွယ်တားဆီးကူညီပေးသည်’ အသုံးပြုမှုပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “မှန်မှန် 'အဆေးလုံးကိုယူပြီးကင်ဆာရောဂါနှစ်မျိုးနှစ်ပုံစံများကိုကာကွယ်တားဆီးကူညီပေးသည်’ အသုံးပြုမှုပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာ” was written by Sarah Boseley Health editor, အင်္ဂါနေ့က 4th သြဂုတ်လအပေါ်အဆိုပါဂါးဒီးယန်းများအတွက် 2015 23.01 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Oxford University researchers say in the past 10 နှစ်ပေါင်း, taking the pill has prevented 200,000 cases of womb cancer in high-income countries. တွင် 2008, the Oxford epidemiologists, analysing the data from 45 studies involving 100,000 အမျိုးသမီးများ, found that regular use for 15 နှစ်ပေါင်း can halve the risk of ovarian cancer.
In both cases, the protection can last for more than 30 နှစ်ပေါင်း, long after women have stopped using contraceptives. Women in their 70s who took the pill in their youth are still enjoying its protection, says Prof Valerie Beral, lead author of the new study on the pill and endometrial (womb) cancer in the Lancet Oncology journal.
ဒါပေမဲ့, သူမကဆက်ပြောသည်, she knew it would not beapopular message. “People [နီးပါး] don’t want to believe it,"ဟုသူမကဆိုသည်.
The paper found that the longer women took the pill, the greater the protection from endometrial cancer they enjoyed. The researchers estimated that from 1965 သို့ 2014, 400,000 cases of endometrial cancer have been prevented in high-income countries, အပါအဝင် 200,000 ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း.
The researchers examined data from 36 studies on 27,276 women with endometrial cancer from North America, ဥရောပ, အာရှတိုက်, သြစတြေးလျ, and South Africa – virtually all the epidemiological evidence ever collected on the effect of oral contraceptives. The study was funded by the Medical Research Council and Cancer Research UK.
24936	0 အပိုဒ်, ကင်ဆာ, Contraception and family planning, ကျန်းမာခြင်း, အဓိကအပိုင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, သတင်း, Sarah Boseley, သိပ္ပံ, Society က, အုပ်ထိန်းသူ, ဗြိတိန်သတင်း
← ကျနော်တို့သက်ကြီးရွယ်အိုသို့နုပျိုသောအသွေးကိုချပြီးအားဖြင့်အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို reverse နိုင်သလား? ငါဘယ်လိုတစ်ခု admin ရဲ့ password ကိုဘဲငါရဲ့ PC သို့ရနိုငျ? →